IVD impahla eluhlaza Suppliers kanye Factory |China IVD Raw material Manufacturers
Ikhithi ye-ForeDirect RT-qPCR
◮Ukuze uthole i-RNA eqondile yokukhulisa isikhathi sangempela kusuka kumaqoqo we-swab ngaphandle kwezinqubo zokuhlanza i-RNA.Le khithi iqeda imijikelezo ye-qRT-PCR phakathi nehora elilodwa.Ingxube ye-enzyme iyinhlanganisela elungiselelwe ye-Reverse Transcriptase, i-Hot-Start Taq DNA polymerase, i-RNase inhibitor.I-Reaction Buffer iqukethe zonke izingxenye ezidingekayo, okuhlanganisa izingxenye ze-buffer ezilungiselelwe, i-Mg2+, i-dUTP, kanye nama-dNTP.
I-Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase
I-Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase iyireverse transcriptase evezwa kubhaktheriya enziwe nge-E. coli kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuhlanganisa kabusha izakhi zofuzo.Kuyi-recombinant DNA polymerase ehlanganisa umucu we-DNA ohambisanayo kusukela ku-RNA enomucu owodwa, i-DNA, noma i-RNA:ingxube ye-DNA.Ayinawo umsebenzi we-RNase H, ukuzinza okuqinile, ukuhlobana okuqinile kwe-RNA, nokuzwela okuphezulu kokutholwa.
I-Foreasy RNase Inhibitor
◮I-RNase inhibitor entsha ephuma kumagundane evezwa kubhaktheriya eyenziwe yi-E. coli isebenzisa ubuchwepheshe bokuhlanganiswa kabusha kwezakhi zofuzo.I-inhibitor ivimbela umsebenzi we-RNase ngokungahlanganisi ne-RNase 1:1, ngaleyo ndlela ivikele.I-RNAubuqotho , futhi ingavimbela ngempumeleloiRNase A, B, C umsebenzi , kodwa hhayi i-RNase T1, T2, H, njll.; Iyabuyiseleka emuva ekubopheni kwe I-RNase Inhibitor ne-RNase, futhi inkimbinkimbi ingahlukaniswa ngama-reagents e-urea kanye ne-sulfhydryl, ukuze ukuguqulwa kabusha kwe-RNase kanye ne-inhibitor kungasebenzi ngendlela engenakuhlehliswa.